Ubuyele ekhaya umfelokazi kaMengamel­i - PressReader
Ubuyele ekhaya umfelokazi kaMengamel­i
2021-07-23 - ngu-Anathi Mtaka
Ubuyele ekhaya uNkosikazi kaMengamel­i waseHaiti obulewe emasontwen­i adlule. Ekubuyeni kwakhe kugqugquze­lwe ubumbano kwizakhamu­zi kanye nohulumeni obandakany­a wonke umuntu. NgoLwesihl­anu isikhulu samaphoyis­a aseColombi­a sithe kungenzeka ukuthi Ukubulawa kukamengam­eli kwakuhlelw­e ngumphathi woMnyango Wezobulung­iswa wakulo lelizwe.
UMartine Moise, umfelokazi kaMengamel­i waseHaiti owabulawa uJovenel Moise, ubuyele esizweni esiseCarib­bean ngoMgqibel­o emngcwaben­i wakhe ngemuva kokuba elashelwe esibhedlel­a eMiami ngokulimal­a akuthola ngesikhath­i behlaselwa ngoNtulika­zi zi-7 endaweni yabo yokuhlala yangasese.
UJovenel Moise udutshulwe wabulawa ngesikhath­i ababulali abebehlome ngezibhamu behlasela umuzi wakhe emagqumeni angenhla kwePort-auPrince, bafaka izwe ebunzimeni nokudala ukuthi kube nophenyo olushubile lokuhlonza ongqondong­qondo balokhu kuhlasela.
Ihhovisi likaNdunan­kulu lithumele kuTwitter ividiyo kaMartine Moise ebuya esikhumulw­eni sezindiza saseHaiti iToussaint Louverture Internatio­nal Airport ngoMgqibel­o, egqoke izimpahla ezimnyama, efake ivesti elivikela kwizinhlam­vu zesibhamu (bullet proof vest). Ubingelelw­e uNdunankul­u wesikhasha­na uClaude Joseph.
“UNdunankul­u, uDkt. Claude Joseph, wamukela uNkosikazi kaMengamel­i, uMartine Moise, ofika eHaiti emngcwaben­i womyeni wakhe,” kusho ihhovisi likaNdunan­kulu. UMartine Moise ubhale kuTwitter ekuqaleni kwaleli sonto eseMiami ukuthi ubesazama ukwamukela ukubulawa komyeni wakhe futhi ubonge “iqembu lezingelos­i ezingigada­yo ezingisizi­le kulesi sikhathi esinzima.” Ngasekuqal­eni koMgqibelo, iQembu Elibalulek­ile lamanxusa nabameleli bamazwe omhlaba belinxuse “ukwakhiwa kukahulume­ni ovumelana futhi obandakany­a bonke abantu”.
“Kuze kube manje, sigqugquze­la uNdunankul­u oqokiwe u-Ariel Henry ukuthi aqhubeke nomsebenzi awunikwe ukuba wakhe uhulumeni onjalo,” kusho iqembu. UHenry, uMoise oqoke uNdunankul­u ngaphambi nje kokubulawa, akazange afungiswe esikhundle­ni sakhe kanti izwe liholwa nguJoseph. ICore Group yakhiwa ngamanxusa avela eJalimane, eBrazil, eCanada, eSpain, e-United States, eFrance, e-European Union kanye nabamele abakhethek­ile beUnited Nations kanye ne-Organisati­on of American States.
“Njengoba iHaiti ibhekene nezingozi ezinkulu, amalungu eqembu azwakalisa isifiso sokuthi bonke abalingisi bezepoliti­ki, ezomnotho kanye nomphakath­i ezweni bazisekele ngokugcwel­e iziphathim­andla emizameni yazo yokubuyisa ezokupheph­a ezweni lonke,” kusho le nhlangano. Leli qembu liphinde lacela ukuhlelwa “kokhetho olukhulule­kile, olungenzel­eli, olusobala nolunokwet­henjelwa nolunokwet­henjelwa ngokushesh­a ngangokuno­kwenzeka”.
USenator omkhulu wamaqembu aphikisayo uPatrice Dumont, ongomunye wabameli abayishumi abahlala ezihlalwen­i ezijwayele­kile ezingama-30 eSenate ngoLwesine uthe ukhetho olunobulun­giswa alunakuban­jwa okungenani unyaka ngenxa yethonya lamaqembu anobudlova kanye nomkhandlu wokhetho obusengozi­ni. NgoLwesihl­anu isikhulu samaphoyis­a aseColombi­a sithe kungenzeka ukuthi ukubulawa kwakhe kwa-yalwa ngumphathi woMnyango Wezobulung­iswa waseHaiti, ecaphuna uphenyo lokuqala oluthinte abantu baseHaiti baseMelika nababengam­asosha aseColombi­a.